Kitra – «Amboaran’ny Caf» : lasa any Kenya ny Fosa Junior, tsy ao anaty lisitra i Nonot | NewsMada
Kitra – «Amboaran’ny Caf» : lasa any Kenya ny Fosa Junior, tsy ao anaty lisitra i Nonot
Matevina ny delegasion’ny Fosa Junior, lasa any Nairobi, hiatrika ny lalao mandroso eo amin’ny fiadiana ny “Amboaran’ny Caf”, taranja baolina kitra. Fihaonana, hikatrohany amin’ny FC Léopard-n’i Kenya.
Nanainga, io maraina io, nihazo an’i Nairobi, Renivohitr’i Kenya, ny Fosa Junior, hiatrika ny lalao savaranonando mandroso eo amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Caf, taranja baolina kitra. Mahatratra 22 ny isan’ireo mpilalao mandrafitra ny ekipa, tompon’ny amboaran’i Madagasikara. Tsy anisan’ireo ao anaty lisitra, i Vombola Jeannot (Nonot), mpilalao nantsoina nanatevina ity ekipan’i Boeny ity.
Antony, misy tsy fifanarahana eo amin’ny Cosfa, ekipa ilalaovany, sy ny Fosa Junior. Ity farany izay nihevitra ny haka an’i Nonot ho mpilalao raikitra ao aminy. Tetsy ankilany, tsy nanaiky izany ny tomponandraikitra eo anivon’ity klioban’ny Tafika ity. Mpilalao nantsoina hanatevina ny Fosa Jr fotsiny, amin’ity lalao afrikanina ity, no nifanarahana fa tsy misy resaka fifindran-toerana tanteraka, raha ny fanazavana azo.
Efa ho 10 andro teo izay ny tsy niarahan’i Nonot tamin’ny Fosa Junior. Na izany aza, tsy nametraka olana ho an’ny Fosa Junior izany teo amin’ny fanomanantenany. Nambaran’i Bob, mpanazatra ny Fosa Junior, nanatrika ny “Super coupe”-n’i Kenya nikatrohan’ny FC Léopard sy ny Gor Mahia, ny asabotsy lasa teo, fa ekipa mahay baolina sy matanjaka ny Léopard. “Nifantoka tamin’izay ny fanazarantenan’ny Fosa tamin’ity herinandro ity. Tanjona ny hamonoana baolina ary hibatana mihitsy ny fandresena, amin’izao lalao mandroso izao”, hoy izy.
Salama tsara daholo ireo mpilalao rehetra ary ambony ny môraly hiatrehana ny FC Léopard ny asabotsy ho avy izao, ao amin’ny kianja Nairobi Stadium.